By kuwana ichi yepaIndaneti, uri ndabvuma kuti akasungwa izvi site Terms uye Conditions of Use, zvose mitemo zvinoshanda uye nemirau, uye kubvumirana kuti uri basa zvaidiwa mitemo ipi zvinoshanda omunharaunda. Kana usingabvumirani navo chero mashoko aya, iwe hazvibvumidzwe kushandisa kana kuwana nzvimbo iyi. Zvinhu zviri ichi yepaIndaneti vanodzivirirwa zvinoshanda Copyright uye zvokutengeserana chiratidzo mutemo.
Mvumo makapiwa vanomboenda kukopa imwe kopi zvinhu (mashoko kana Software) musi MobileCasinoFreeBonus.com rebuve nzvimbo woga, non-vezvokutengeserana chinongopfuura kuona chete. Ndiwo ngaamuitire ane rezinesi, kwete kutamira ezita, uye pasi rezinesi ichi ungasazviziva:
yokugadziridza kana kutevedzera zvinhu;
kushandisa zvinhu zvokuvakisa chinangwa chipi zvebhizimisi, kana kuti chero vanhu vakawanda (vezvokutengeserana kana zvisiri vezvokutengeserana);
kuedza decompile kana kuzvishandura injiniya chero Software yaiva pamusoro MobileCasinoFreeBonus.com rebuve paIndaneti;
obvisa Copyright kana zvimwe proprietary ukanyora kubva zvinhu; kana
uchatamisa zvinhu mumwe munhu kana “girazi” zvinhu pane zvimwe Server.
rezinesi iri anofanira vapiwa vanodimbura kana iwe haro okurambidzwa izvi uye anogona wakagumiswa MobileCasinoFreeBonus.com chero nguva. Pamusoro kugumisa kuona kwako izvi zvinhu kana pamusoro kugumiswa rezinesi iri, unofanira kuparadza chero kutorwa zvinhu munyika yenyu kana zvemagetsi kana rakadhindwa urongwa.
Zvinhu pamusoro MobileCasinoFreeBonus.com rebuve paIndaneti anopiwa “sezvo ari”. MobileCasinoFreeBonus.com haritauri warranties, akaratidza kana raireva, uye neizvozvo disclaims uye negates zvimwe warranties zvose, kusanganisira pasina chipingidzo, kunditsoropodza warranties kana mamiriro ezvinhu merchantability, kugwinya nokuti imwe chinangwa, kana asiri kukanganisa pamusoro zvedzidzo pfuma kana zvimwe kutyora kodzero. Uyezve, MobileCasinoFreeBonus.com haasi kutanga kana kuti chero mifananidzo pamusoro kururama, zvichida mhinduro, kana rakavimbika kushandisa zvinhu pamusoro wayo paIndaneti kana zvimwewo chokuita zvinhu zvakadaro kana chipi nzvimbo chokuita nzvimbo iyi.
Hapana chiitiko anofanira MobileCasinoFreeBonus.com kana zvayo bhizimisi nemhosva chero kunokanganisa (kusanganisira, pasina chipingidzo, kunokanganisa nokuti kurasikirwa mashoko kana purofiti, kana nokuda mabhizimisi chidzivaidzo,) anomuka kubva kushandisa kana kutadza kushandisa zvinhu pamusoro MobileCasinoFreeBonus.com kuti paIndaneti, kunyange kana MobileCasinoFreeBonus.com kana MobileCasinoFreeBonus.com mumiririri mvumo rave nezvokudzokera nomuromo kana kuti rugwaro zvinobvira kukuvadza akadaro. Nokuti vamwe nevatongi hatibvumiri yemararamiro kunditsoropodza warranties, kana zvimwe zvavasingakwanisi liability nokuda dzinokosha kana kwemasanga kunokanganisa, zvausingakwanisi izvi varege kushanda kwamuri.
5. Kudzokororwa kwemaBhaibheri ekare uye Errata
Zvinhu dziri MobileCasinoFreeBonus.com rebuve nzvimbo vaigona zvinosanganisira hwokugadzira, typographical, kana Photographic kukanganisa. MobileCasinoFreeBonus.com haasi kutanga kuti chero zvinhu panobudisirwa mashoko paIndaneti Hwakarurama, yose, kana ano. MobileCasinoFreeBonus.com anogona kuchinja zvinhu huri panobudisirwa mashoko paIndaneti chero nguva pasina chiziviso. MobileCasinoFreeBonus.com haadaro, zvisinei, chero kuzvipira kunatsurudza zvinhu.
MobileCasinoFreeBonus.com haana aongorora vose nzvimbo chokuita yayo paIndaneti uye haisi mhosva zviri chero kwakabatana nzvimbo yakadaro. The nechekuita mukugarisana chero vang hazvirevi tsigiro nokuda MobileCasinoFreeBonus.com kwenzvimbo. Kushandisa chimwe chokuita yepaIndaneti yakadaro panguva rokushandisa hatiripe.
MobileCasinoFreeBonus.com kuti adzokorore mashoko aya kushandiswa nokuda kwayo yepaIndaneti chero nguva pasina chiziviso. Nokushandisa ichi yepaIndaneti yauri ndabvuma kuti nekubatwa panguva iyoyo shanduro Terms izvi uye Conditions of Use.
8. Dare Law
vanoti chero chokuita MobileCasinoFreeBonus.com rebuve nzvimbo anofanira kudzorwa mitemo State of London pasina pamusoro wayo kunetsana mutemo zvokudya.
General Terms uye Conditions kushandiswawo Shandisa mumwe Web Site.
Your zvakavanzika kuchikosha zvikuru kwatiri. zvakanyatsonakanaka, dzatinenge taumba Policy ichi kuitira kuti vanzwisise kuti isu unganidza, shandisa, kutaurirana ndikakuzivisa uye kuashandisa pachavo. Zvinotevera inotsanangura kwedu zvakavanzika itsika.
Asati kana panguva nekunhonga zvemunhu, tichava kuziva zvinangwa iyo mashoko ari inounganidzwa.
Tichafara unganidza uye kushandisa mashoko pachake zvinongobva pamwe chinangwa kuzadzisa zvinangwa iwayo unotaurwa nesu uye zvimwe zvinangwa enderana, kana isu tiwane mvumo wacho hanya kana sezvo nomutemo.
Ticharamba chete kuramba zvemunhu chero zvakafanira kuzadzika zvinangwa iwayo.
Tichafara unganidza ruzivo kuburikidza nomutemo uye nokuenzanisira nzira uye munhu, apo zvakakodzera, nezivo kana mvumo pamusoro wacho hanya.
Personal Data vanofanira kushanda kune chinangwa nokuda rinofanira kushandiswa, uye, kusvika pamwero zvakakodzera kuti zvinangwa avo, inofanira kuva yakarurama, yose, uye kwokuwirirana.
Isu achachengeta zvemunhu nokuda musoro kuchengeteka vasaite kurasikirwa kana kuba, uyewo kunze komutemo kuwana, kuburitsa, akatevedzera, kushandisa kana nadzurudzo.
Tichakugadzirira nyore nyore vatengi ruzivo pamusoro policies edu uye tsika zvine chokuita kurapa zvemunhu.
Tiri vakazvipira kuitisa bhizimisi redu maererano izvi nenheyo kuitira kuti zvakavanzika mashoko rwese runochengetedzwa uye inotarisirwa.